नेप्सेमा ३ करोड २० लाख २३ हजार कित्ता बोनस र हकप्रद सूचीकरण, कुन कम्पनीको कति ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » नेप्सेमा ३ करोड २० लाख २३ हजार कित्ता बोनस र हकप्रद सूचीकरण, कुन कम्पनीको कति ?
काठमाडौं - नेप्सेमा मंगलबार कुल ३ करोड २० लाख २३ हजार ३४.९ कित्ता बोनस र हकप्रद सेयर सूचीकृत भएको छ । नेप्सेमा २ वटा वाणिज्य बैंक, १ डेभलपमेन्ट बैंक र १ हाइड्रोपावर कम्पनीको बोनस र हकप्रद सेयर सूचीकृत भएको हो ।
जसमा सबैभन्दा धेरै नबिल बैंकको १ करोड ८५ लाख ७७ हजार १४० कित्ता बोनस सेयर सूचीकृत भएको हो । त्यसैगरी, सानिमा बैंकको १ करोड १० लाख ३६ हजार २१४.४ कित्ता बोनस र ङादी ग्रुप पावरको ४ लाख ४६ हजार ८६८ कित्ता बोनस सेयर पनि सूचीकरण गरिएको छ । यस्तै, एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको १९ लाख २२ हजार ८१२.५ कित्ता हकप्रद पनि मंगलबार नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ ।